Fifandraisana amin'ny vahiny - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny tsara indrindra fampiharana(apps, software) ifandraisana amin'ny vahiny, ny fianarana amin'ny fiteny amin'ny tompon'ny teny, nitety ny firenena amin'ny manodidina teny. "Miarahaba Ny Daty" Tena tsara ny fampiharana ny miresaka amin'ny vahiny, anao hisafidy ny teny izay te-hianatra, ary avy eo dia afaka misafidy ny fanohanana fiteny io ho an'ny fianarana na fotsiny noho ny fifandraisana araka ny mason-tsivana: - taona, ny firenena, ny fitenyAfaka miresaka, manao antso an-telefaonina (maimaim-poana), nifampijery ny alalan ny fakan-tsary, manoratra hafatra, misy ny tsara hitady ny tenin-drazany, anisan'izany ny eo an-toerana iray (izay hita eo akaikin'ny ianao). Misy naorina-ao ny mpandika teny, ka tsy hatahotra, raha toa ka misy zavatra tsy mazava, dia afaka mandika foana.tena mety ny fanitsiana ny rafitra, dia afaka manapa-kevitra fa tsara izany fa ny mpiara-miasa voasoratra araka ny tokony ho izy.
Misy rindrambaiko ho an'ny Iphone sy Android. "Ndeha hiara-hianatra" Mahafinaritra app fa ny fianarana teny anglisy, espaniola, frantsay ary ny tenim-pirenena hafa.
Raha io fomba io ianao, dia afaka manontany tena maro ny fanontaniana ny tompony, ary mahazo mahay valiny ho azy ireo. Misy aterineto dikan ny hoe"ndao hiara-hianatra"rindrambaiko ho an'ny iPhone sy Android. "Aoka isika miara-mandeha" Tena tsara, fa ho an'ny mpanao dia lavitra, mpizaha-tany, dia afaka mandika ny kabary indray mandeha ao amin'ny vola vahiny, indrindra fa rehefa mandeha ao amin'ny mahazatra amin'ny firenena, ny fiteny izay tsy fantatra. Misy naorina-in PhraseBook amin'ny momba ny arivo fehezanteny, teny tutorials, ny fifandraisana lahatsary karatra, sy ny fitsapana. Misy fitaovana misy fiarovana raha tampoka hahita anao amin'ny ratsy ny toe-draharaha na ny zavatra efa nitranga taminao sy ny tenanao. Ny naorina-ao amin'ny boky iray momba ny kolontsaina, ny fahalalam-pomba sy ny fitsipiky ny fitondran-tena.
Chatroulette fifandraisana amin'ny chat roulette an-tserasera tsy misy fisoratana anarana amin'ny chat roulette an-tserasera avy amin'ny finday tsy misy fisoratana anarana Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ny tsara indrindra amin'ny chat roulette ny lahatsary amin'ny chat room ho zava-dehibe ny hahafantatra manambady vehivavy te-hihaona video Fiarahana tamin'ny tovovavy manerana izao tontolo izao